Home Wararka James Swan oo wada Qaban-Qaabada shir aay isugu yimaadaan DF, Mucaaradka &...
James Swan oo wada Qaban-Qaabada shir aay isugu yimaadaan DF, Mucaaradka & DG.
MOL ayaa heshay xog in Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, James Swan, in uu wado uu ku doonayo in uu qabsoomo shir ay isugu yimaadaan madaxda dowladda federaalka iyo maamulada.
Shirkaas ayaa, sida ay xoguhu sheegayaan, wuxuu diblumaasiga reer Mareykan qorsheynayaan in xal kama dambeys ah looga gaaro is-faham-waaga ka taagan doorashooyinka qaranka ee 2020-21.
Qaar ka mid ah Diblomaasiyiinta Daneeya Somalia ayaa kula taliyay Swan in shirka uu noqdo mid aay ku wada dhan yihiin dhammaan Mucaaradka & Maamul Goboleedyada, waxaana arrintan ka biyo diidsan DF sida aan xogta ku helnay.
Swan ayaa todobaadkii hore wuxuu u socdaalay magaala madaxda ku meelgaarka Koonfur Galbeed ee Baydhabo halkaasoo madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen ugala hadlay qaabka wadahadal loo geli karo.
Laftagareen oo u jaranjeera Villa Soomaaliya ayaa dalbadey in uu dhameeyo khilaafka taagan kadib markii dhigiisa Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye [Qoor-qoor] ku fashilmay xalinta is-mari-waaga taagan.
Dedaalada uu waddo Swan ayaa salka ku haya sidii dalka looga badbaadin lahaa firaaq dastuuri ah maadaama muddo xileedka hay’addaha dowliga ah muddo xileedkooda gabaabsi yahay, qaarna dhamaadeen.
Lama ogga hadii madaxweyne Farmaajo ogolaan doono wadahadalka uu isku-dabaridayo James Swan maadaama uu olole xoogan ugu jiro in uusan mar dambe miiska wadahadalka la fariisan maamuladda.
Dhanka kale, warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay wadahadalo telefoonka ah yeesheen Farmaajo iyo Axmed Madoobe. Balse, gorgortankooda gobolka Gedo ma miradhalin.
Sidda ay illo xog-ogaal MOL u sheegeen, madaxweyne Farmaajo ayaa doonayay in telefoon lagu xaliyo qadiyada gobolka Gedo oo xudun u ah is-mari-waaga taagan kana mid ah qodobada la isku hayo.
Dowladda madaxweyne Farmaajo ayaa gobolka Gedo geysay ciidamo kuwaas oo meesha saarey maamulkii Jubaland ee halkaas ka jiray.
Fahad Yaasiin Xaajia Daahir, taliyaha sirdoonka Soomaaliya oo saameyn ku leh go’aanada waaweyn ee dowladda madaxweyne Farmaajo, ayaa la aaminsan in uu ka cabsi qabo in hadii Farmaajo wadahadalo la yeesho mucaaradka & maamuladda diidan qorshahiisa, uu mar kale ka tanaasulo qorshihiisa la xiriira in uu kursiga difaacdo.